TOPNew: James Rodriguez oo iska diiday toban jibaarka mushaarkiisa Real Madrid!! Yaa usoo Bandhigay? Maxaase u qorsheysan? | Laacibiin & Baahin – News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs	Tuesday, January 17th, 2017	Home
TOPNew: James Rodriguez oo iska diiday toban jibaarka mushaarkiisa Real Madrid!! Yaa usoo Bandhigay? Maxaase u qorsheysan?
Jan 11, 2017 - Aragtiyood	James Rodriguez ayaa diiday fursad uu ku qaadan lahaa ku dhowaad toban jeer mushaarka Real Madrid uu ka qaato haddii uu aqbali laha dalab kaga yimid Horyaalka Shiinaha.
sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Spain kooxda Hebei Fortune oo uu maamulo tababarihii hore ee Manchester City Manuel Pellegrini ayaa sameysay dalab rikoorka adduunka noqon lahaa kaasoo £ 95 milyan ku kacayay laakiin ninka reer Colombia ayaa iska diiday.
Rodriguez ayaa iska diiday fursad noqon laheyd taariikhda oo dhan ciyaaryahanka ugu qaalisan ee Real Madrid laga iibsado.
Wargeyska Span ee AS, ayaa sheegay in 25-sano jirkaan uu iska diiday fursada uu ku qadan laha 10 jibaar mushaarka waqtigaan uu ka qaato kooxdiisa Real Madrid.
Florentino Perez ayaa la kulmay madaxda kooxda Hebei intii ay soctay xafladii Globe Soccer bishii December 27 – waxaana kulankaansi goob joog ka ahaa wakiilka Rodriguez Jorge Mendes.
Kooxda Chinese Super League ayaa markii hore dalab £ 63m usoo gudbisay Real Madrid waana lacagtii ay kula soo wareegeen sannadkii 2014, laakiin qiimaha ayaa lagu qasbay in ay gaarsiiyaan mardambe £ 95m.
kooxo ay kamid yihiin Manchester United, Arsenal, PSG iyo Inter Milan ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan kabtanka xulka Colombia kaasoo la filayo inuu ka tago kooxdiisa.